गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » स्तन क्यान्सरपछि गर्भवती हुने सम्भावना हुन्छ की हुन्न ? – विशेषज्ञका कुराबाट जान्नुहोस्
काठमाडौं । स्तन क्यान्सर महिलामा हुने क्यान्सरको सबैभन्दा धेरैमा हुने क्यान्सर हो ।
जब स्तनमा कोशिकाहरू असामान्य रूपमा विकास हुन थाल्छन्, तब स्तन क्यान्सर आफै सुरु हुन्छ। धेरै प्रकारका स्तन क्यान्सरहरू छन् ।
प्रत्येक प्रकारको स्तन क्यान्सरमा फरक–फरक देखिन्छन्। त्यस्तै, स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित धेरै कारकहरूले यस अवस्थाको गम्भीरता र बिरामीको मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ।
साथै, क्यान्सर पछि मानिसको शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू देखा पर्छन् र उनीहरूको शारीरिक क्षमता र शक्ति कम हुन थाल्छ। अक्सर, स्तन क्यान्सर पछि महिलाहरुको बारेमा सबै भन्दा चिन्ता के छ कि उनीहरु आमा बन्ने संभावना छ की छैन ?
किनभने केही आमा नबन्दै स्तन क्यान्सरको शिकार बनेका छन् । स्तन क्यान्सरबाट पीडित महिलाहरूले अक्सर डाक्टरहरूलाई सोध्छन् कि स्तन क्यान्सर पछि गर्भधारण गर्न सकिन्छ ?
के स्तन क्यान्सर पछि आमा बन्न सम्भव छ ?
विज्ञहरूका अनुसार स्तन क्यान्सरबाट निको भइसकेपछिको गर्भावस्था सुरक्षित हुन्छ । सही चिकित्सकीय सहयोग र सुपरिवेक्षणमा यो गर्भावस्था राम्रोसँग अघि बढ्न सक्छ ।
डा. मेघल संघवी भन्छन्, “नेपाल र भारतमा स्तन क्यान्सरका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । विश्वभर स्तन क्यान्सरका घटनाहरू पनि तीब्र गतिमा बढिरहेका छन्। स्तन क्यान्सरका कारण वर्षेनी ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या धेरै छ । तर अझै पनि मानिसहरुलाई स्तन क्यान्सरबारे पर्याप्त जानकारी छैन । अब स्तन क्यान्सर वृद्ध महिलाहरु बाहेक युवा युवतीहरुमा देखिन थालेको छ ।
डा. संघवीका अनुसार, “धेरैजसो अवस्थामा स्तन क्यान्सरको सबैभन्दा ठूलो कारण धुम्रपान, ढिलो रजोनिवृत्ति, मोटोपना, ढिलो गर्भावस्था, स्तनपान नगराउने हो । यसका लागि बेला–बेला म्यामोग्राम र स्क्रिनिङहरू गरिरहनुपर्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार स्तन क्यान्सरको उपचार सकिएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म गर्भधारण गर्नुहुँदैन । वास्तवमा, स्तन क्यान्सर उपचार पछि चाँडै दोहोरिने सम्भावना बढी हुन्छ।
२ देखि ३ वर्षपछि आफ्नो सर्जन, डाक्टर वा कुनै पनि प्रजनन विशेषज्ञसँग परामर्श लिएर गर्भको योजना बनाउँन सक्नुहुन्छ । स्तन क्यान्सरपछि महिलाहरूले ७ देखि १० वर्षसम्म हार्मोनल थेरापी लिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण, डाक्टरले गर्भधारण सुरक्षित छ भनी नभनेसम्म गर्भधारणको योजना नगर्नुहोस्। यसरी, गर्भधारण गरेर बच्चालाई स्तनपान गराउन पनि सुरक्षित हुनेछ।
स्तन क्यान्सरको समस्याबाट पीडित धेरै बिरामीहरुमा स्तन बचाएर पनि क्यान्सरको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छैन ।
क्यान्सरको उपचार गर्ने उद्देश्यले जनरल सर्जनमा पुग्ने त्यस्ता बिरामीहरुले स्तन बचाएर पनि क्यान्सरको उपचारको विकल्प सुन्न पाउँदैनन् । परिणामः बचाउन सकिने स्तनलाई क्यान्सरको उपचारको नाममा काटेर फालिन्छ ।
तर, नेपालमा न्यून संख्याका क्यान्सर सर्जन यस्ता पनि छन्, जसले स्तन बचाएर क्यान्सरको सर्जरी गर्छन् र सम्बन्धित बिरामीको रुप बिग्रिन दिंदैनन् । स्तन नहुँदाको आत्माविश्वास गुम्न दिंदैनन् ।
त्यस्तै सर्जन थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा पनि उपलब्ध छिन् । भारतका प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेर स्तन क्यान्सरको विषयमा खोज गरेकी नेपाली चिकित्सक तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. बानिरा कार्कीले नर्भिकमा स्तन क्यान्सर बिरामीका लागि अत्याधुनिक उपचार सेवा दिइरहेकी छिन् । उनका अनुसारपनि स्तन बचाएर पछि स्तनपान गराउन र गर्भधारण गर्न मिल्नेगरी उपचार हुन्छ । आत्तिनु पर्दैन ।